Great Quality ထုတ်လုပ်သူများသည် Shoe မှလူစီးဖိနပ်စီးသည့်ဒီဇိုင်းသစ်ကိုထုတ်လုပ်သည်
ဒြပ် pu အထက်
ရာသီအသစ်ရရှိနိုင်ပါ3အရောင်ပေါင်းစပ်စတိုင်။
ဒြပ် pu, breathable ကွက်အထက်
နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်သက်တောင့်သက်သာရှိသော Flyknitting ခြေအိတ်အမျိုးသားများအတွက်
ပို၍ ကြီးမားသော forefoot နှင့်မြင့်မားသောအမြှုပ် stack နှင့်အတူနည်းပညာပိုင်း FlyKnit အထက်နှင့်အတူပိုမိုအဆင်ပြေစီးနင်းပေးစွမ်းသည်။ ဇာ -up, ပိတ်ပစ်အနီးကပ်မထိုက်မတန်များအတွက်ဇာပတ်ပတ်လည်ဇာပါရှိပါတယ်။ Bootie ပုံစံကော်လာနှင့်လျှာသည်သင်၏ဖနောင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးသည်။ ကော်လာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ On-off ဆွဲ tabs များ။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ insole React midsole cushioning သည်ဖိအားကိုတွန်းလှန်ပြီးစွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ outsole တွင်ရော်ဘာတိုးများလာခြင်းကဆွဲဆောင်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
အမေဇုံထိပ်တန်းရောင်းသူအဖြူထည်ဝတ်စုံအမျိုးသားစီးဖိနပ် Sneaker အမျိုးသားများအတွက်အနက်ရောင် yeezy ဖိနပ်ပုံနှိပ်ခဲ့သည်
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအားကစားရုံလေ့ကျင့်သူများပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သို့ကျပါ။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်စောင်ပုံစံဖြင့်အထက်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်အိတ်ကပ်။ ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အားအင်ကုန်ခန်းချိန်များတွင်ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကိုနေရာမှန်ထားရန်သော့ခတ်ထားသောဒေါက်ဖိနပ်ပါသောရိုးရာဇာများပိတ်ထားခြင်း။ လျှာနဲ့ကော်လာ။ လျင်မြန်လွယ်ကူသောသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် Bootie တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖနောင့်ကိုဆွဲချခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပါ။ ရှူရှိုက်မိသောကွက်နံရံနှင့်ကူရှင်လောင်း။ ရေမြှုပ် midsole သဘာဝခံစားပေးပါသည်။ flex groove နှင့်အတူရော်ဘာ outsole ...
2020 ပူပြင်းသည့်ပုံစံပုံစံ Knit အထက်ဖက်ရှင်ဖိနပ် Classic Brand အမျိုးသားစီးအားကစားဖိနပ် Breathable Yeezy ဖိနပ်
အမျိုးသားများအတွက် flyknitting အားကစားဖိနပ်၏အကူအညီဖြင့်နှစ်သိမ့်မှုအနေဖြင့်ရင်ခွင်ပြီးခါးကိုပွေးပါ။ Cushioning: ပေါ့ပါးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောတုံ့ပြန်မှု။ ဇာ -Up ပိတ်သိမ်း။ ကော်လာနှင့်လျှာသည်သင်၏ဖနောင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးသည်။ Stretch lining သည်ခြေအိတ်ကဲ့သို့ခံစားမှုမျိုးကိုပေးစွမ်းသည်။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ insole React cushioning သည်ဖိအားကိုတွန်းလှန်ပြီးစွမ်းအင်ကိုအဆင့်တိုင်းကိုပြန်လည်ပေးသည်။ ဖနောင့်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းသည်သင့်ပြေးလမ်းအတိုင်းတည်ငြိမ်စေသည်။ ရော်ဘာ outsole ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မအမှတ် ၅၀၃၀ ။ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Hot sell ဂန္ထီးထိုးထားသောအထက်စီးပြေး ...
တုန့်ပြန်သောစနီကာဖိနပ်နှင့်ပွဲစဉ်သို့သွားရန်သင်၏လမ်းကိုခုန်။ အားသွင်းပါ။ outsole နှင့်ပေါ့ပါးသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခံနိုင်ရည်အကြားကောင်းမွန်သောထိန်းညှိမှုသည်အမြင့်ဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်သောကြာရှည်ခံမှုကိုပေးသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် flyknit အထက်ချောမွေ့မထိုက်မတန်နှင့်ခံစားပေးစွမ်းသည်။ ပိုကောင်းသောမထိုက်မတန်နှင့်လိုက်ဖက်သောနှစ်သိမ့်မှုအတွက်ချောမွေ့စွာဆန့်ကျက်သည့် Bootee ဆောက်လုပ်ရေး။ ဇာ -Up ပိတ်သိမ်း။ Breathable အထည်အလိပ်နံရံ။ Fixed မြှုပ် insole ။ Full-length EVA တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းသည်ကြာရှည်ခံ၊ ပေါ့ပါးသောကူရှင်နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ A ...
ပေါ့ပါးပြီးတရားရုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လေ့ကျင့်မှုနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်သင်လိုအပ်သောကြာရှည်ခံမှုကိုမထိခိုက်စေပါ။ ပေါ့ပါးပြီးရှင်သန်နိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်ကြာရှည်ခံသည့်အမြင့်ကိုချုပ်ထားသည်။ ဇာ -Up ပိတ်သိမ်း။ ရှူရှိုက်နိုင်သောအထည်အလိပ် sockliner ။ Fixed မြှုပ် insole ။ အပြည့်အဝရှည်သော polyurethane midsole သည်တုန့်ပြန်သောကူရှင်များအတွက်ခံနိုင်ရည်ကောင်းသည့်ပြန်ခုန်ထွက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရာဘာ outsole သည်အမြင့်ဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်သောကြာရှည်ခံမှုကိုပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပုဒ်မအမှတ် ၅၀၂၇ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ...
သင်၏အမွေကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ဖိနပ်အသစ်များကိုဝတ်ဆင်ထားပါ။ Predecessor - ဒဏ္Legာရီပုံပြင်တုံ့ပြန်မှု။ ပံ့ပိုးမှုအမျိုးအစား: ကြားနေ။ Cushioning: ပေါ့ပါးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောတုံ့ပြန်မှု။ မျက်နှာပြင်: လမ်း။ ပိုမိုကျယ်ပြန် forefoot နှင့်ပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးအထက်အပေါ်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာစီးနင်းပေးသည်။ ပေါ့ပါးပြီးရှင်သန်နိုင်သောကွက်လပ်အထက်။ ဇာ -Up ပိတ်သိမ်း။ Padded ကော်လာနှင့်လျှာသည်သင်၏ဖနောင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးသည်။ ကော်လာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ On-off ဆွဲ tabs များ။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ insole ပေါ့ပါးသောဖီလာဖိနပ် ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များပုဒ်မနံပါတ် .: 5028 Pr ...
အဆိုပါတောင်တက်ဖိနပ်အတွက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပျော်စရာ - ဖြည့်နေ့အဘို့တက်ပြင်ဆင်ပါ! Faux သားရေနှင့်ကွက်လပ်အထက်။ ဇာ -Up ပိတ်သိမ်း။ အကာအကွယ်ရော်ဘာခြေချောင်း ဦး ထုပ်။ ဖနောင့်ဆွဲကွင်းဆက်။ လျှာနဲ့ကော်လာ။ ရှူရှိုက်လွယ်သောကွက်နံရံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖိနပ်ကိုခံစားနိုင်သည်။ EVA midsole တည်ငြိမ်သောနှစ်သိမ့်ပေးပါသည်။ ရာဘာ outsole သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုထုတ်ပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အပိုဒ်အမှတ် ၅၀၅၃ ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဂန္ထဝင်ဒီဇိုင်းစက်ရုံပူလက္ကားယောက်ျား၏တောင်တက်ဖိနပ်အထက်ပစ္စည်း - ဒြပ်ပေါင်းကူ၊
စိတ်ချရသောအပေါ်ဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်ခြေရာခံတောင်တက်ဖိနပ်၏အလွန်မြင့်မားသော outsole ဆုပ်ကိုင်မှုကြောင့်ရာသီဥတုဆိုးဝါးခြင်းသည်သင်၏တောင်တက်အစီအစဉ်များကိုဘယ်တော့မှနှေးကွေးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆင်ပြေမိုဘိုင်းအတွက်နိမ့်ပရိုဖိုင်းကိုတောင်တက်ဖိနပ်။ ဒြပ်ထပ်နှင့်အတူတာရှည်ခံတံခါးပိတ်ကွက်ထိပ်။ ပွန်းပဲ့ကာကွယ်မှုအတွက်ဒြပ်ခြေချောင်း ဦး ထုပ်နှင့်ဖနောင့်။ တစ် ဦး ဦး စားပေးမထိုက်မတန်များအတွက်ရိုးရာဇာ -Up စတိုင်။ ထပ်ဆောင်းအတွင်းပိုင်းသက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်အသက်ရှူနိုင်သောအထည်အလိပ်နံရံ။ ကြာရှည်ခံသောသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကူရှင်များနှင့်စွမ်းအင်မြင့်မားခြင်းတို့အတွက်ပေါ့ပါးသော midsole ဖြစ်သည်။ L ...